3. garoonka diyaaradaha | RayHaber
Cahit Turan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa shaaciyay in qiimaha mashruuca garoonka diyaaradaha Istanbul uu yahay ku dhawaad ​​10 bilyan oo Yuuro isla markaana la filayo in mashruucan lagu dhameystiro 2028. Ku-xigeenka CHP Samsun Kemal Zeybek'in Gaadiidka ayaa ka jawaabtay su’aasha [More ...]
Duqa Magaalada İmamoğlu Waxaa Lagu Baaray Deegaanka Beşiktaş Meelaha Qarxinta
Madaxweynaha EkBB Ekrem İmamoğlu wuxuu balanqaaday xafladiisa ka hor xaflada, “Waxaan mari doonaa wadooyinka magaalada Istanbul”. Marka hore, İmamoğlu wuxuu booqday goobta dhismaha Beşiktaş ee Kabataş - khadka metrooga Mahmutbey. [More ...]
Talaabada Koowaad ee Wadada Wadada Diyaaradaha ee Diyaaradaha Magaalada Istanbul ee Catalca
3 Suuragal ma ahan in la gaaro metro. Khadadka tareenka ee 26 km inta udhaxeysa Çatalca iyo Arnavutköy wuxuu ku socdaa ajandaha lagu bixinayo gadiidka garoonka diyaaradaha tareenka. Qiimaha loo xisaabiyey sida 2 bilyan 627 milyan 600 kun TL [More ...]
Istanbul ayaa kaalinta ugu hooseysa dhammaan shuruudaha
Xogta ku jirta warbixinnada qaranka iyo tan caalamiga ah ee ku saabsan Istanbul ayaa la soo ururiyey. 10 milyan 560 kun 963 loogu talagalay doorashada dib loo cusboonaysiiyay ee Istanbul ayaa mar kale u socota goobaha codbixinta si loo doorto Duqa Magaalada Istanbul. milyan [More ...]
3 by the North Forest Defense (KOS). Marka loo eego falanqaynta sawirka dayax-gacmeedka ee garoonka diyaaradaha, gebi ahaanba 13 milyan oo geed ayaa la jaray dhismaha awgiis. Warbixinta EIA ee mashruuca, 2 kala bar tirada geedaha la goyn doono [More ...]
3, oo ka tagi doona xarunta basaska subaxa hore ee Istanbul, Ayazağa. Baska diyaaradaha ee tagaya wadada Arnavutköy Habipler ayaa si lama filaan ah dab qabsaday. Cid kasta oo baska ku jirtay kuma soo celin kubadihii ololka [More ...]
3, oo AKP ay sanado badan xayeysiinaysay. Duulimaadyada ayaa carqaladeeya garoonka diyaaradaha. Intii aan kahadalnay dhibaatooyinkaas, sheegashada garoonka ayaa ka iibin doonta shisheeyaha. Ku-xigeenka CHP Istanbul Özgür Karabat, oo arrinta u keenay ajendaha Golaha Qaranka ee Turkiga oo leh a [More ...]
Diyaaradaha diyaaradaha ee garoonka diyaaradaha ee Istanbul, Pilots Worry
Duulimaadyada culus ee sababay duulimaadyada culus ee shalay ka dhacay Istanbul ayaa sidoo kale si xun loo saameeyay Diyaaradihii abaabulayay duullimaadyada garoonka cusub ee laga furay Istanbul, waxay ahayd inay soo booqdaan hawada muddo dheer ka hor inta aysan soo degin. Sida la ogsoon yahay, mid gaaban [More ...]
Garoonka Moved, Maxaa ku dhacay masiirka shaqaalaha? TAV iyo IGA ayaa la filayaa
Madaarka TAV, oo ka shaqeeya garoonka diyaaradaha Ataturk, 3.Havalimanı'nın sababtuna tahay dib u dejinta ku dhowaad shaqaalaha 4500 ayaa shaqada laga joojiyay. Dhanka kale, gudoomiyaha guddiga fulinta ee shirkadda 3. [More ...]
Sanadkaan waxaan la kulmi doonaa dhamaadka Febraayo daboolka cad marka uusan baraf noqon doonin. Barafkii barafku wuxuu ahaa mid 'naxariis badan' marka loo eego sannadihii hore. Si tartiib ah ayey roob ugu daatay. Heerkulka hawadu si kedis ah uma dhicin. Roob soo socdaa usbuuca dhammaadka [More ...]
3. Ma jiri doonaan dib u dhigis ah garoonka diyaaradaha?
Gegada diyaaradaha ee magaalada Istanbul ayaa noqotay meesha muran weyn ka taagnaa tan iyo markii la dhisay. Hadda howsha guuritaanka. Sidaad ogtahay, kooxda Airlinehaber ayaa waliba taas sameyn kara [More ...]
Abaalmarinta Xuquuqda Aadanaha ee SODEV 3. Bixiya Shaqaalaha Garoomada
D Abaalmarinta Xuquuqda Aadanaha, Dimuqraadiyadda, Nabadda iyo Wadajirka, oo ay si joogto ah u siiso SODEV tan iyo 2001, ayaa lagu soo bandhigay guuleystayaasha xafladda lagu qabtay Huteelka Taksim Hill Hotel. N Xuquuqda Aadanaha, Dimuqraadiyadda, Nabadda iyo Wadajirka "3. [More ...]
3 oo ka socda SODEV. Abaalmarinta Xuquuqda Aadanaha ee Shaqaalaha Garoomada
Xuquuqda Aadanaha, Dimuqraadiyadda, Nabadda iyo Wadajirka 2018 SODEV ' Waxaa la siiyay shaqaalaha garoonka diyaaradaha. D Abaal marinta Xuquuqda Aadanaha, Dimuqraadiyadda, Nabadda iyo Wadajirka 'SO' oo ay siisay SODEV si joogto ah tan iyo 3 sannadkan [More ...]